Lamaane Noocee ah ayaa guur farxad leh Hela? | Where Education Talks
Lamaane Noocee ah ayaa guur farxad leh Hela?	October 26, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 9:19 pm Sirta guurka ee dhanka raggu waa doorashada gabadh qurux badan oo ugu yaraana shan sano ka yar ninka, sida ay daraasad ku ogaadeen khubaro Ingriis ah oo ka tirsan Jaamacadda Bath University.
Lamaanaha noocan ah ayaa xidhiidhkoodu muddo sii jiraa, gaar ahaan hadii aanu midkoodna hore usoo marin guur hore.
Maxsuulka baadhitaan lagu sameeyey 1,000 lamaane oo is qaba , socotayna mudo dhan shan sano oo la eegayay bal inta xidhiidhkooda ama wada deganaanshahoodu ku siman yahay ayaa noqotay in haddii gabadhu ka weyntahay ninkeeda shan sanno iyo kabadan uu yimaado furriin saddex jeer ka badan hadii afada iyo saygeedu isku da’ yihiin.
Hadiise ninku ka weyn yahay da’ ahaan xaaskiisa guulaha guurku waa sareeyaan iyo hadii weliba gabadha aqoonteedu sarayso. Deganaanshaha iyo xasilida qoysku maaha mid lugo adag ku taagan hadii lamaanaha midkood guur hore oo furriin ku danbeeyey soo maray, waxase ka deganaansho fiican qoyska ka unkama laba qof oo guur hore usoo maray haseyeeshee guurkoodaas hore aanu sal dhigin oo dabadeedna kala tagay.
Khubaradan ayaa aaminsan in waxa badanaa lamaanuhu isku doortaan ay tahay jacaylka, muuqaalka jidheed ee qofka, qiimaha ay wadaagaan iyo isku mid noqoshada diintooda iyo dabeecadooda. Laakiinse waxay intaas ku darayaan in aasaaska xulashadu tahay da’da, tacliinta qofka, iyo asalka dhaqankiisa waana arrimaha laga yaabo inay yareeyaan furriinka, haddii lamaanaha isdooranayaa ku saleeyaan xulashadooda.
Source: European Journal of Operational Research.
Qalinkii & Tarjumaddii: Axmed Maxamud Cilmi (shawqi)